Sarihin'ny Mandrakizay - Cloud Library
Accueil - Boky - Sarihin’ny Mandrakizay
Izao fiainana izao dia tsy inona fa zavona, nefa maro amintsika no tsy miraharaha ny fiainana any an-koatra. Nefa ny fomba fiainantsika izao fiainana izao no hamaritra ny fomba handaniantsika ny mandrakizay. Ny Soratra Masina dia milaza amintsika fa hisy karazana sy ambaratongam-balisoa ho an’ny mpino. Izany dia manomboka hatreo amin’ny fijerena ny zava-bitan’olona iray levona eo am-pitsarana, ka hatrany amin’ny fahitana olona iray miara-manjaka amin’i Kristy.
Ampahatsiahivin’i John Bevere antsika avy ao amin’ny 2 Korintiana 5:9-11, fa ny mpino rehetra dia hitsangana eo anatrehan’i Kristy mba handray ny zavatra rehetra nisasarany teo amin’ny fiainana. Maro amintsika no ho taitra rehefa ampahafantarina fa ny ankamaroan’ny fotoanantsika dia nolaniana tamin-javatra izay tsy mikaonty any amin’ny mandrakizay akory.
Inona ary izany no fomba ananganantsika fiainana manana ny lanjany? Ato amin’ny Sarihin’ny Mandrakizay, dia ho fantatrao ny fomba ahitanao ny antsonao ka hampitomboanao isa ny zavatra efa nomen’Andriamanitra anao. Hahazo hery be tokoa ianao mba hiasanao mafy ho amin’ny zavatra maharitra rehefa hitanao ilay fomba fijerin’ny lanitra.